Professional Professional Engine Oil ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ | 1D;ONE
1D; ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်အင်ဂျင်နီယာထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ, ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာ
1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်ရေနံထုတ်လုပ်သူများ
ဂီယာအုံသည် Gearbox ဖြစ်ပြီးဂီယာပုံးရေနံသည်ဂီယာပုံးရေနံဖြစ်သည်။ Gearbox Oil သည်စုပေါင်းအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ Gearboxes များကိုလက်မရမီ gearboxes နှင့်အလိုအလျောက်ဂီယာအုံများကိုခွဲထားသည်။ Gearox ဆီအများအားဖြင့်အလိုအလျောက်ဂီယာအုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဂီယာစနစ်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်အသုံးပြုသောရေနံထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးဂီယာထုတ်လွှင့်မှု၏သက်တမ်းကိုချောဆီနှင့်ချဲ့ထွင်ရန်အခန်းကဏ္ play မှပါ0င်နိုင်သည်။
ဆီ, i.e. အင်ဂျင်သည်လွင့်စင်ကြယ်သောရေနံသည် 0.91 × 10 ³ (kg / m ³) သည် 0.91 × 10 ခု (KG / M ³) သည်ချောဆီနှင့်ယိုစိမ့်ခြင်း, သံချေး, တံဆိပ်ခတ်ခြင်း, ၎င်းကိုမော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ဆီ၏ "သွေး" ဟုလူသိများသည်။ Sease Oil သည်ချောဆီမီးဆီ၏အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောဆီရေနံသည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Additive များသည်အခြေခံဆီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်အသစ်များပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဆီလိမ်းရန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်သည်မော်တော်ကား၏စိတ်နှလုံးဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်တွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆန့်ကျင်သောသတ္တုမျက်နှာပြင်များစွာရှိသည်။ ဤအပိုင်းများသည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်အပူချိန် 400 ℃မှ 600 ℃အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာအသစ်သည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို Crystal စင်ကြယ်သောအပြည့်အ0အပြည့်အ0ဆီအပြည့်အ0ရှိနိုင်ပြီးထူးခြားသောစွမ်းအင်သန့်ရှင်းရေးနည်းပညာကိုဤအခြေခံတွင်ထည့်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြမ်းတမ်းသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအရအရည်အချင်းပြည့်ဝသောဆီမှသာလျှင်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကို0တ်ဆင်ပြီး0န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေနိုင်သည်။
10W-40 သည်၎င်း၏ SAE စံအတွင်း viscosity တန်ဖိုးကိုဖြစ်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်တန်ဖိုးသည်အင်ဂျင်ရေနံသည်အဆင့်ပေါင်းစုံအင်ဂျင်ရေနံဖြစ်သည်ဟု ဦး ဆုံးဖော်ပြသည်။ W သည်ဆောင်းရာသီကိုကိုယ်စားပြုပြီး W ရှေ့တွင်နံပါတ်သည်အပူချိန်နိမ့်သောစီးဆင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အနိမ့်သောအပူချိန်မှာတန်ဖိုးသေးငယ်တဲ့, ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်း။ W ပြီးနောက်ကိန်းဂဏန်းသည်အပူချိန်မြင့်မားသောရေနံတည်ငြိမ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည် (i.e. ပါးလွှာခြင်းဖြစ်နိုင်ချေ) ။ ပိုကြီးတဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာရေနံတည်ငြိမ်မှုပိုကောင်းလေ။
ငါတို့ 1D Auto အစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ 2012 နှစ်များတွင်စတင်ခဲ့ပြီးအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သောအဓိကထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုအကွာအဝေးတွင်အကောင်းဆုံးအဆင့်အင်ဂျင်အဆို့ရှင်ပါဝင်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကိုအရည်အသွေးစံနှုန်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များထုတ်ကုန်များသည်အသုံးပြုရန်, စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း, ဤအပြင်အနေဖြင့်ဤအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်ရယူနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်စက်ယန္တရားနှင့်ခေတ်မီသောနည်းပညာများတပ်ဆင်ထားသည့်ကြိုတင် အခြေခံ. အခြေခံအဆောက်အအုံယူနစ်တစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကမ်းလှမ်းထားသောထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှိနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအဆင့်မြှင့်တင်နေပါသည်။